“ဘွဲ့ရရင် ဘာအလုပ်လုပ်ကြမလဲ?” – ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) - Lucky9
Homepage / Knowledge / “ဘွဲ့ရရင် ဘာအလုပ်လုပ်ကြမလဲ?” – ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)
“ဘွဲ့ရရင် ဘာအလုပ်လုပ်ကြမလဲ?” – ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)
(၁) ဟောပြောပွဲတွေမှာ လူငယ်တွေနဲ့တွေ့ရင်၊ ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ပါ။ “အောင်မြင်တဲ့အလုပ်ကို ဝါသနာပါပါလို့ အမြဲပြောလေ့ရှိတယ်။ ဒီအခါ၊ ကျွန်တော်တို့ ကျွန်မတို့ ဘာဝါသနာပါသလဲ” ဆိုတဲ့ အမေးနဲ့ကြုံရပြန်တယ်။ ဆယ်တန်းအောင်ကာစကလေးတွေနဲ့တွေ့တော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ဘာဝါသနာပါလို့ပါမှန်းမသိ။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကကျတော့ သူပျော်တာရွေုးလုပ်သတဲ့။ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပြောတဲ့ “ဝါသနာပါတာကို ပိုက်ဆံရအောင်လုပ်၊ ပိုက်ဆံရတာကို ဝါသနာပါအောင်လုပ်” လို့ပြောပြန်တော့၊ ပိုက်ဆံရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ကိုယ်ပဲပိုက်ဆံရှာပေးရမလိုလို။ လစာတွေအများကြီးလိုချင်တဲ့သူကို ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်သလဲ ပြန်မေးတော့ အဖြေကမရ။ ဘားအံဘက်ရောက်တုန်းက မဟာဘွဲ့ရ အလုပ်လက်မဲ့ကလေးတစ်ယောက်၊ နောက်ဆုံးမှာ ဒီဇိုင်နာဘ၀နဲ့ဝင်ငွေတွေရ၊ အလုပ်တွေဖြစ်နေတာကြားခဲ့ရရဲ့။ တကယ်တော့ ဒီပြဿနာတွေဟာ ကိုယ့်ဆီမှာပဲရှိနေတာမျိုးမဟုတ်။
(၂) ဖက်ရှင်နဲ့အရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှာ မဟာဘွဲ့ရတဲ့ ၂၆ နှစ်အရွယ်ကလေးမတစ်ယောက်၊ အလုပ်ခွင်ဝင်ဖို့ အလွန်တက်ကြွနေတယ်။ ဂျာမနီက ဖက်ရှင်လက်လီလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အလုပ်ရဖို့မှန်းထားတယ်။ ဒါပေမယ့် လျှောက်လွှာ ၂၅ စောင်၊ လူတွေ့လေးခုဖြေပြီးတဲ့အထိ အလုပ်လက်မဲ့ပဲဖြစ်နေတော့ စိတ်ဓါတ်တွေကျ။
ဘွဲ့ရတွေကို အကြံဉာဏ်တွေ တလှေကြီး ဝိုင်းပေးကြလေ့ရှိတယ်။ အိပ်မက်နောက်ကလိုက်ပါ၊ စွဲလမ်းတာကိုလုပ်ပါ၊ မြတ်နိုးတာကိုလုပ်ပါ၊ သူများနဲ့အတူအောင်လုပ်ပါ၊ ထူးထူးခြားခြားလုပ်ပါ။ အဲဒါတွေလုပ်ရင်းနဲ့ ပိုက်ဆံရဖို့လည်းလိုသေး၊ ပြောရတာသိပ်ကောင်းပေါ့။ နားထောင်ရတဲ့သူတွေအတွက်က ကြွေးတွေတပုံကြီးတင်လာ။ အိပ်မက်တွေနောက်လိုက်၊ ကိုယ်ဝါသနာပါတာတွေနောက်လိုက်၊ မြတ်နိုးတဲ့အလုပ်နောက်လိုက်ရင်းနဲ့ ဘာမျှဖြစ်မလာတဲ့ သာဓကတွေက အများကြီး။ တကယ်ကို ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ရတဲ့အထိ ထိုင်စောင့်နေရမလား? ဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ရမလားဆိုတာတွေက စဉ်းစားစရာ၊ ရွေးချယ်စရာတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။
ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလိုက်ရှာမနေပဲ၊ ရေရှည်မှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ လောလောဆယ် ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲ၊ ကိုယ်ဟာဘယ်နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်သလဲဆိုတာတွေ စဉ်းစားသင့်တယ်။ အသက် ၂၀ ကျော် ဘွဲ့ရကာစမှာ ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာ၊ သေသေချာချာသိဖို့ ခက်တယ်။ ဘွဲ့ရကတည်းက ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေလုပ်၊ နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်အထိ အဲဒီလောကထဲမှာပဲ ဆက်ရှိနေတဲ့လူမျိုးတွေ့ဖို့ဆိုတာ အတော်ခက်တာ။ တမျိုးပြီးတမျိုး၊ တဆင့်ပြီးတဆင့် ပြောင်းနေတဲ့သူတွေကို တွေ့ရတာများတယ်။ အခုရောက်နေတဲ့ နေရာတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်လောက်တုန်းက လုံးဝတွေးမထားတဲ့ နေရာတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒီလိုပြောတဲ့အတွက် ကိုယ့်စိတ်ကူးတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေကို လွှင့်ပစ်လိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေ ချဲ့ကြည့်ဖို့ အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွဆိုတာ၊ တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံဖို့လိုပါတယ်။
အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါ၊ ကိုယ့်ရေရှည်ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ ကိုက်-မကိုက် လိုက်တိုင်းမကြည့်ပါနဲ့။ နောက်အခါမှာ အသုံးဝင်မယ့် တစုံတစ်ရာရ-မရ ဆိုတာနဲ့ တိုင်းကြည့်ပါ။ သုတေသီတစ်ယောက်ကတော့ တိုင်းကြည့်စရာ သုံးခုပေးပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရတာလား? ဂုဏ်သိက္ခာရှိတာလား? ၀င်ငွေရတာလား? တဲ့
အများအားဖြင့်တော့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲကုမ္ပဏီကြီးတွေ၊ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကို မျက်စေ့ကျတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်ကုမ္ပဏီက ဘာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လေ့လာစရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာသိချင်၊ ဘာတတ်ချင်သလဲလို့ မေးကြည့်ပါ။ ကုမ္ပဏီအကြီးကြီးမှာ ကိုယ်လုပ်ခွင့်မရပေမယ့်၊ ကုမ္ပဏီအသေးမှာ လုပ်ခွင့်ရတာမျိုးနဲ့ ကြုံကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကွက်ကွက်လေးကိုပဲ မကြည့်ပါနဲ့။ အဲဒီအလုပ်တွေလုပ်ဖို့၊ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေရှိဖို့၊ ဖြည့်စွက်ထားဖို့လိုမလဲဆိုတာ ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်အဆင့်မှာ တာဝန်မယူရသေးပေမယ့်၊ ကိုယ့်အထက်က ၀န်ထမ်းတွေလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို တာဝန်ယူနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားပါ။ ဘယ်ကုမ္ပဏီဆိုတာထက်၊ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကိုယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်၊ ဘာတွေလုပ်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတာက ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားရင်လည်း၊ တည်ထောင်ကာစလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အလုပ်သင်အနေနဲ့ ၀င်လုပ်ရင်း၊ လေ့လာဆည်းပူးနိုင်တယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုတိုးတက်လာအောင် လုပ်စရာတွေကို ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ် လေ့လာခွင့်ရတာလည်း ကောင်းတယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံတွေဟာ ကုမ္ပဏီကို ဘယ်သူက ပိုင်တယ်၊ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာထက် အရေးပါပါတယ်။
တချို့လုပ်ငန်းတွေ (အလှကုန်၊ စားသုံးကုန်၊ ဆေးဝါး၊ ဘဏ်ဆိုတာမျိုး)မှာ ဂုဏ်သိက္ခာက အရေးကြီးပါတယ်။ နာမည်ကြားလိုက်ရုံနဲ့၊ အထူးပြောစရာမလိုတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ လုပ်ခွင့်ရရင် ဧရာမအခွင့်အရေးပဲ ။ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထွေအထူးမိတ်ဆက်နေစရာမလိုဘူး။ ပြောင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မထင်ရှားတဲ့၊ အထူးသဖြင့် နာမည်ပျက်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးဆိုရင်၊ အတော်စဉ်းစားရမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ထဲမှာ နာမည်ရကုမ္ပဏီကြီးတွေပါနေရင် နောင်အလုပ်လျှောက်ရတာ ပိုလွယ်စေနိုင်တယ်။
အလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့ ထိုင်စောင့်မနေဘဲ၊ လောလောဆယ်မှာ ၀င်ငွေရတဲ့ အလုပ်လုပ်နေဖို့လည်း လိုတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ လျှောက်လွှာတင်တာနဲ့ တကယ်ခန့်တာနဲ့ကြားမှာ အကြာကြီး စောင့်နေရတတ်တယ်။
၀န်ထမ်းလောက လုပ်ငန်းခွင်လောကဆိုတာမျိုးကလည်း တသမတ်တည်း သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အလှည့်အပြောင်းတွေ ရှိတတ်တယ်။ အတက်အကျတွေ ရှိတတ်တယ်။ စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေရှိတယ်။ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ခံစားရတာတွေလည်း တွေ့ကြုံရတတ်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေကလည်း သင်ခန်းစာရနိုင်တယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ဟာ ထင်သလောက်မလွယ်မှန်း သိသွားနိုင်တယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ဟာ ကိုယ်နဲ့မကိုက်တဲ့ အလုပ်လည်း ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ကို ရရမယ်။ ဒါမှမဟုတ်၊ ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်က ကိုယ့်ကိုရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါ။
ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) , ညွှန်း(Harvard Business Review)
“ဘှဲ့ရရငျ ဘာအလုပျလုပျကွမလဲ?” – ခငျမောငျညို (ဘောဂဗဒေ)
(၁) ဟောပွောပှဲတှမှော လူငယျတှနေဲ့တှရေ့ငျ၊ ဝါသနာပါတဲ့အလုပျကို အောငျမွငျအောငျလုပျပါ။ “အောငျမွငျတဲ့အလုပျကို ဝါသနာပါပါလို့ အမွဲပွောလရှေိ့တယျ။ ဒီအခါ၊ ကြှနျတျောတို့ ကြှနျမတို့ ဘာဝါသနာပါသလဲ” ဆိုတဲ့ အမေးနဲ့ကွုံရပွနျတယျ။ ဆယျတနျးအောငျကာစကလေးတှနေဲ့တှတေ့ော့ သူတို့ကိုယျသူတို့ဘာဝါသနာပါလို့ပါမှနျးမသိ။ မိတျဆှတေဈယောကျကကတြော့ သူပြျောတာရှေုးလုပျသတဲ့။ စာရေးဆရာတဈယောကျပွောတဲ့ “ဝါသနာပါတာကို ပိုကျဆံရအောငျလုပျ၊ ပိုကျဆံရတာကို ဝါသနာပါအောငျလုပျ” လို့ပွောပွနျတော့၊ ပိုကျဆံရအောငျ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတော့ ကိုယျပဲပိုကျဆံရှာပေးရမလိုလို။ လစာတှအေမြားကွီးလိုခငျြတဲ့သူကို ဘာတှလေုပျပေးနိုငျသလဲ ပွနျမေးတော့ အဖွကေမရ။ ဘားအံဘကျရောကျတုနျးက မဟာဘှဲ့ရ အလုပျလကျမဲ့ကလေးတဈယောကျ၊ နောကျဆုံးမှာ ဒီဇိုငျနာဘဝနဲ့ဝငျငှတှေရေ၊ အလုပျတှဖွေဈနတောကွားခဲ့ရရဲ့။ တကယျတော့ ဒီပွဿနာတှဟော ကိုယျ့ဆီမှာပဲရှိနတောမြိုးမဟုတျ။
(၂) ဖကျရှငျနဲ့အရောငျးစီမံခနျ့ခှဲမှုမှာ မဟာဘှဲ့ရတဲ့ ၂၆ နှဈအရှယျကလေးမတဈယောကျ၊ အလုပျခှငျဝငျဖို့ အလှနျတကျကွှနတေယျ။ ဂြာမနီက ဖကျရှငျလကျလီလုပျငနျးတဈခုမှာ အလုပျရဖို့မှနျးထားတယျ။ ဒါပမေယျ့ လြှောကျလှာ ၂၅ စောငျ၊ လူတှလေ့ေးခုဖွပွေီးတဲ့အထိ အလုပျလကျမဲ့ပဲဖွဈနတေော့ စိတျဓါတျတှကြေ။
ဘှဲ့ရတှကေို အကွံဉာဏျတှေ တလှကွေီး ဝိုငျးပေးကွလရှေိ့တယျ။ အိပျမကျနောကျကလိုကျပါ၊ စှဲလမျးတာကိုလုပျပါ၊ မွတျနိုးတာကိုလုပျပါ၊ သူမြားနဲ့အတူအောငျလုပျပါ၊ ထူးထူးခွားခွားလုပျပါ။ အဲဒါတှလေုပျရငျးနဲ့ ပိုကျဆံရဖို့လညျးလိုသေး၊ ပွောရတာသိပျကောငျးပေါ့။ နားထောငျရတဲ့သူတှအေတှကျက ကွှေးတှတေပုံကွီးတငျလာ။ အိပျမကျတှနေောကျလိုကျ၊ ကိုယျဝါသနာပါတာတှနေောကျလိုကျ၊ မွတျနိုးတဲ့အလုပျနောကျလိုကျရငျးနဲ့ ဘာမြှဖွဈမလာတဲ့ သာဓကတှကေ အမြားကွီး။ တကယျကို ကိုယျလုပျခငျြတဲ့ အလုပျရတဲ့အထိ ထိုငျစောငျ့နရေမလား? ဘယျအလုပျဖွဈဖွဈ လုပျရမလားဆိုတာတှကေ စဉျးစားစရာ၊ ရှေးခယျြစရာတှေ ဖွဈလာကွတယျ။
ကိုယျလုပျခငျြတဲ့အလုပျကိုပဲလိုကျရှာမနပေဲ၊ ရရှေညျမှာ ကိုယျလုပျခငျြတဲ့အလုပျကိုလုပျဖို့ လောလောဆယျ ဘာတှလေုပျနိုငျသလဲ၊ ကိုယျဟာဘယျနရောမှာ ကြှမျးကငျြသလဲဆိုတာတှေ စဉျးစားသငျ့တယျ။ အသကျ ၂၀ ကြျော ဘှဲ့ရကာစမှာ ကိုယျဘာလုပျခငျြတယျ၊ ဘာဖွဈခငျြတယျဆိုတာ၊ သသေခြောခြာသိဖို့ ခကျတယျ။ ဘှဲ့ရကတညျးက ကိုယျလုပျခငျြတာတှလေုပျ၊ နောငျအနှဈနှဈဆယျသုံးဆယျအထိ အဲဒီလောကထဲမှာပဲ ဆကျရှိနတေဲ့လူမြိုးတှဖေို့ဆိုတာ အတျောခကျတာ။ တမြိုးပွီးတမြိုး၊ တဆငျ့ပွီးတဆငျ့ ပွောငျးနတေဲ့သူတှကေို တှရေ့တာမြားတယျ။ အခုရောကျနတေဲ့ နရောတှဟော လှနျခဲ့တဲ့ အနှဈနှဈဆယျသုံးဆယျလောကျတုနျးက လုံးဝတှေးမထားတဲ့ နရောတှဖွေဈနတေတျတယျ။ ဒီလိုပွောတဲ့အတှကျ ကိုယျ့စိတျကူးတှေ၊ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေို လှငျ့ပဈလိုကျရမယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျလညျး မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့အမွငျတှေ ခြဲ့ကွညျ့ဖို့ အလုပျဟူသမြှ ဂုဏျရှိစှဆိုတာ၊ တနျဖိုးရှိတယျဆိုတာ လကျခံဖို့လိုပါတယျ။
အခှငျ့အလမျးတှနေဲ့ကွုံကွိုကျတဲ့အခါ၊ ကိုယျ့ရရှေညျရညျမှနျးခကျြတှနေဲ့ ကိုကျ-မကိုကျ လိုကျတိုငျးမကွညျ့ပါနဲ့။ နောကျအခါမှာ အသုံးဝငျမယျ့ တစုံတဈရာရ-မရ ဆိုတာနဲ့ တိုငျးကွညျ့ပါ။ သုတသေီတဈယောကျကတော့ တိုငျးကွညျ့စရာ သုံးခုပေးပါတယျ။ အတှအေ့ကွုံရတာလား? ဂုဏျသိက်ခာရှိတာလား? ဝငျငှရေတာလား? တဲ့
အမြားအားဖွငျ့တော့ ဒိတျဒိတျကြဲကုမ်ပဏီကွီးတှေ၊ အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ ကုမ်ပဏီကွီးတှကေို မကျြစကေ့တြတျကွတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘယျကုမ်ပဏီက ဘာအလုပျပဲဖွဈဖွဈ၊ လလေ့ာစရာတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုဘာသိခငျြ၊ ဘာတတျခငျြသလဲလို့ မေးကွညျ့ပါ။ ကုမ်ပဏီအကွီးကွီးမှာ ကိုယျလုပျခှငျ့မရပမေယျ့၊ ကုမ်ပဏီအသေးမှာ လုပျခှငျ့ရတာမြိုးနဲ့ ကွုံကွိုကျနိုငျပါတယျ။ ကိုယျလုပျခငျြတာ ကှကျကှကျလေးကိုပဲ မကွညျ့ပါနဲ့။ အဲဒီအလုပျတှလေုပျဖို့၊ ဘယျလိုအရညျအခငျြးတှရှေိဖို့၊ ဖွညျ့စှကျထားဖို့လိုမလဲဆိုတာ ကွညျ့ပါ။ ကိုယျ့အဆငျ့မှာ တာဝနျမယူရသေးပမေယျ့၊ ကိုယျ့အထကျက ဝနျထမျးတှလေုပျနတေဲ့ အလုပျတှကေို တာဝနျယူနိုငျအောငျ ပွငျဆငျထားပါ။ ဘယျကုမ်ပဏီဆိုတာထကျ၊ တဈနတေ့ဈနေ့ ကိုယျဘာတှလေုပျနတေယျ၊ ဘာတှလေုပျခှငျ့ရနတေယျဆိုတာက ပိုပွီးအရေးကွီးပါတယျ။
တဈနမှေ့ာ ကိုယျပိုငျကုမ်ပဏီတဈခုတညျထောငျဖို့ ရညျရှယျထားရငျလညျး၊ တညျထောငျကာစလုပျငနျးတဈခုမှာ အလုပျသငျအနနေဲ့ ဝငျလုပျရငျး၊ လလေ့ာဆညျးပူးနိုငျတယျ။ လုပျငနျးတဈခုတိုးတကျလာအောငျ လုပျစရာတှကေို ဟိုစပျစပျဒီစပျစပျ လလေ့ာခှငျ့ရတာလညျး ကောငျးတယျ။ ဒီအတှအေ့ကွုံတှဟော ကုမ်ပဏီကို ဘယျသူက ပိုငျတယျ၊ ပိုကျဆံဘယျလောကျရှိတယျဆိုတာထကျ အရေးပါပါတယျ။
တခြို့လုပျငနျးတှေ (အလှကုနျ၊ စားသုံးကုနျ၊ ဆေးဝါး၊ ဘဏျဆိုတာမြိုး)မှာ ဂုဏျသိက်ခာက အရေးကွီးပါတယျ။ နာမညျကွားလိုကျရုံနဲ့၊ အထူးပွောစရာမလိုတဲ့ ကုမ်ပဏီတှမှော လုပျခှငျ့ရရငျ ဧရာမအခှငျ့အရေးပဲ ။ကိုယျ့ကိုယျကို အထှအေထူးမိတျဆကျနစေရာမလိုဘူး။ ပွောငျးပွနျစဉျးစားကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ မထငျရှားတဲ့၊ အထူးသဖွငျ့ နာမညျပကျြရှိတဲ့ လုပျငနျးမြိုးဆိုရငျ၊ အတျောစဉျးစားရမယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ကိုယျရေးရာဇဝငျထဲမှာ နာမညျရကုမ်ပဏီကွီးတှပေါနရေငျ နောငျအလုပျလြှောကျရတာ ပိုလှယျစနေိုငျတယျ။
အလုပျကောငျးကောငျးရဖို့ ထိုငျစောငျ့မနဘေဲ၊ လောလောဆယျမှာ ဝငျငှရေတဲ့ အလုပျလုပျနဖေို့လညျး လိုတယျ။ တဈခါတဈခါ လြှောကျလှာတငျတာနဲ့ တကယျခနျ့တာနဲ့ကွားမှာ အကွာကွီး စောငျ့နရေတတျတယျ။
ဝနျထမျးလောက လုပျငနျးခှငျလောကဆိုတာမြိုးကလညျး တသမတျတညျး သှားတာမြိုးမဟုတျဘူး။ အလှညျ့အပွောငျးတှေ ရှိတတျတယျ။ အတကျအကတြှေ ရှိတတျတယျ။ စိနျချေါမှုတှရှေိတယျ။ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာတှရှေိတယျ။ ထိုကျထိုကျတနျတနျ ခံစားရတာတှလေညျး တှကွေုံ့ရတတျတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့အမှားတှကေလညျး သငျခနျးစာရနိုငျတယျ။ ကိုယျလုပျခငျြတဲ့အလုပျဟာ ထငျသလောကျမလှယျမှနျး သိသှားနိုငျတယျ။ ကိုယျလုပျခငျြတဲ့အလုပျဟာ ကိုယျနဲ့မကိုကျတဲ့ အလုပျလညျး ဖွဈနနေိုငျတယျ။ ကိုယျနဲ့ထိုကျတနျတဲ့အလုပျကို ရရမယျ။ ဒါမှမဟုတျ၊ ထိုကျတနျတဲ့အလုပျက ကိုယျ့ကိုရှာတှလေိ့မျ့မယျလို့ ယုံကွညျပါ။
ခငျမောငျညို (ဘောဂဗဒေ) , ညှနျး(Harvard Business Review)
Previous post ကိုကို ကျောင်းလာကြိုမယ်ဆိုလို့ကလေးစောင့်နေတာဆိုပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ကျက်သရေရှိလှပနေတဲ့ ခေးဆက်သွင်
Next post ငွေထုပ်ကြီးပေါ်မှာ ထိုင်နေရပြီး ထမင်းငတ်နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ